Bayraktar TB2 SİHA waxaa la geeyay Taliska Guud ee Gendarmerie | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraBayraktar TB2 SİHA gaarsiinta Taliska Guud ee Gendarmerie
08 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, cimilada, Headline, ISDIFAACA, TURKEY, VIDEOS
Bayraktar tb siha gaarsiinta taliska guud ee gendarmerie waa la fuliyay
3 Alaabada Difaaca Baykar ilaa Taliska Guud ee Gendarmerie calan TB2 SİHA ayaa la geeyay. Madaxweynaha warshadaha Difaaca İsmail Demir ayaa ku dhawaaqay gudbinta isaga oo adeegsanaya akoonkiisa warbaahinta bulshada. Wadaagga birta:
“3 Amarro Gendarmerie calan Waxaan gaarsiinay TB2. Markaa, tirada UAV / SİHA ee soo gashay alaabada ayaa gaadhay 107. Dhaqdhaqaaqa Teknolojiyadda Qaranka Baykar Defence, oo u taalay inuu qalbiga ka shaqeeyo marxalad kasta oo adag oo dalkeenna ka mid ah, Waan ku hambalyeynayaa. bayaanno.
Bayraktar TB 2 Nidaamka S / UAV Nidaamka S / UAV, oo ay hormariyeen oo ay adeegsadeen Baykar, waa qaab isku xiraha nidaamka iskuxiran oo ku saleysan qaab dhismeedka kaas oo bixiya dhammaan xalka isticmaalaha. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay Bayraktar TB2 S / UAV Platform, Saldhigga Dhulka, Koontaroolka Dhulka, Terminalka Muuqaalka fog, Saldhiga Sare iyo modules Trailer. Thanks to awooda farsamada iyo awooda farsamada Baykar, nidaamka oo dhan waxaa laga soosaaray gudaha iyo qaran ahaanba.
Turkey ayaa sihai horeysay maxalliga ah iyo qaranka Bayraktar TB2, by guul leh ku dhammaysanaysid 150 kun oo saacadaha duulimaadka ayaa saxiixay rikoor cusub oo taariikhda duulista Turkish. Nidaamka Siiraha ee loo yaqaan 'Bayraktar TB2 SİHA', oo jabiyey sababa cusub oo ah taariikhda duulista Turkiga oo si guul leh ku soo idlaaday Howlgalkii Nabadda ee ka soo horjeeday urur argagixiso, ayaa sidoo kale si firfircoon loogu adeegsaday Ciidamada Qalabka Sida ee Ukraine iyo Qatar.
Turkey uu horumariyo by qaranka Baykan saara SOS nidaamka, marka caddaymaha iyo ka qeyb galay howlgalada ka fikiray ee adduunka ugu fiican ee ay fasalka National SIH Bayraktar TB2, Ciidamada Qalabka Sida Turkish ee 2014 (Taf) galay alaabada. Gawaarida aan duuliyaha laheyn, oo ku hubeysnaa 2015, ayaa waxaa si wada jir ah u adeegsado TAF, Taliska Guud ee Gendarmerie, Agaasinka Guud ee Amniga iyo Agaasinka Sirdoonka Qaranka. 107 Bayraktar TB2 SİHA hadda waxay ku jirtaa alaabada; Ilaa iyo 2014, wuxuu si firfircoon ugu hawlan la dagaalanka argagixisada ciidamada amniga gudaha iyo dibedda.
Bayraktar TB2 UAVs oo ah Agaasimaha Guud ee Amniga ayaa bilaabay inuu shaqeeyo
Bayraktar TB2 UAVs, oo ay dhiibto Baykar Defence, waxay si firfircoon uga bilowdey howlahooda Agaasinka waaxda Adana ee hoos imaadka isku duwida Agaasinka Guud ee Duulista iyo Waaxda Booliska Adana.
Bishii Disembar 2019, 6 Bayraktar TB2 UAVs ayaa la geeyay EGM. Madaxweynaha warshadaha Difaaca Dr. İsmail Demir wuxuu ku dhawaaqay in 6 Bayraktar TB2s ah lasiiyay Agaasimaha Guud ee Amniga ayagoo la wadaagaya bartiisa Twitter.
Bayaanka uu soo saaray Agaasimaha Guud ee Amniga ee akoonnada warbaahinta bulshada: “Agaasinka waaxda Adana Duulista Hawada Bayraktar Tactic (UAV) TB2-da waxay howlahooda ka bilaabeen isku duwaha Agaasinka Guud ee Duulista ee Waaxda Booliska iyo Waaxda Booliska Adana. Waxay saameyn badan ku yeelan doontaa guusha cutubyadayada. ” ayaa lagu yiri bayaanka. (Isha: defenceturk)
Otokar wuxuu gaarsiiyaa gaarsiinta kama dambaysta ah ee sanadka illaa ESHOT
Furitaanka Rasmiga ah ee Qadka Pegasus Kuweyt oo ay kaqayb galayaan Madaxweyne Abdullah Gül…
Halkalı Agaasimaha Gaadiidka Agaasimaha ayaa la qabtay